01 | October | 2012 | QEERROO
Diddaa Qeerroo fi Irreecha Bishooftuu 2012
October 1, 2012 October 1, 2012 / Qeerroo	/ Leave a comment
Ayyaannii Irreechaa Guyyaa Kaleessaa Ummataa Oromoo Godinaalee Oromiyaa Garaa Garaa Irraa walittii Dhufuun Horaa Arsadiittii Haala Baay’ee Gammaachiisaa ta’een kabajame,
Ummaannii Oromoo guyyaa kaleessaa magaalaa Bishoftuu Hora Arsadiittii wayitumaa irreechaa kabajatan dhaamsaawwaan garaagaraa tokkummaa, hidhamtoonnii Oromoo haa hiikamaan, Oromiyaan kan ummataa Oromooti, Oromiyaan ni bilisoomti, harkaa wal qabannee haa kaanuu jechuun Ummaannii dhaamsaa waliif dabarsaa ture, Dargaggeessaa fi dargaggeettii, hayyotaa fi beektonni sirna kanaa irraattii WBO faarsaa olaanii, Addaattii ABO’n gaachaanaa Ummaataa Oromootii jechuun hegeree fi abdii ummata Oromoo tokkicha ABO faarsaa olanii jiru.
Kabaajaa Ayyaana Irreechaa kana ilaalchisuun motummaan abbaa irree Wayyaanee humna waranaa magaalaa Bishooftuu irraa jalqabee hanga bakka irreechaatti heddumminaan tamsaasuun sochiilee qeerroo jala bu’anii dargaggoota nagaan ayyaana irreefachuuf dhufan ABO fi WBO faarsitan sababa jedhuun heddumminaan mana hidhaatti guuraa olanii jiru.Haalli kun kanaan osoo jiruu kanneen hafan diddaa isaanii itti fufuun faaruu fi sirboota qabsoon diddaa isaanii muldhisaa turan. Ummaannii Oromoo kaayyoo diinaa kanaa cabsuun wareegamaa bonsaa kanfaluun akeekaa diinaa cabsuun akkaa irreeffatee diddaa qabsoo bilisummaa Oromoof ammoo bakka galu maratti onaa fi araddaa isaa irratti ummata waliin tokkummaan akka ka’u harka wal qabatee waadaa waliif galee akka jiru gabaasi qeerroo addeessa.
Ayyaana Irreechaa fi Diddaa
(Qeerroo, Finfinnee, 1 Onkoloolessa 2012) Ayyaanni Irreechaa bara 2012 sirna hoo’aa fi miidhagaan kabajamee jira; Qeerroon Oromiyaas sirna kana irratti haga Bilisummaan Oromiyaa mirkanaa’utti qabsoo maraalessa finiinsuuf waadaa waliif seenanii jiru.
Ayyaana kana irratti dhiibbaan guddaa karaa mootummaa godhamus, Qeerroo fi sabboontoti Oromiyaa dhimmoota murteesoo ta’an milkeesuu fi ayyaanicha akka hin gufanne gochuu irratti hojiin boonsaa hojjatamuusaa Qeerroon dabalee inbsee jira.
SBO Fulbaana 30 Bara 2012
Wayyaanoti gaaffii mirga Oromummaa fi adaa Oromoo dura dhaabbatan illee ayyaanni Ireechaa tokkummaa Oromoon kabajame.
Akkuma beekamu Guyyaan haraa,Fulbaanni 30 guyyaa kabajamaa Uummanni Oromoo aadaa fi amantaa abbootii keenya ganamaa hangafticha magaalaa Bishooftuutti gaggeeffatuudha. Biyyattii keessatti sirni Irreecha Alsadee kun bifa gammachuu fi hoo’aadhaan uummataa Oromoo fi Qeerrooleedhaan kabajamee darbeetu jira. Ayyaana kana irratti saboonni Oromoo argamanii jiran baayinni isaanii akka tilmaamutti miliyoona 4 hanga 5 ti jedhama. Kabaja ayyaana kanaa irratti dursa akkuma gabaasne mootummaan Wayyaaneedhaa hidhattoota isaa fi poolisoota isaa sirna kabajamuu ayyaanaa kana irratti ramadee akka jiru gabaasne jirra. Haatau malee waraanni mootummaadhaa haa jiraatuyyuu malee Qeerroo fi uummanni diddaa muldhisan itti fufuun muldhisee jira. Keessattuu magaala Bishooftuutti utuu hin galin waraanni wayyaaneedhaa daandii cufuudhaan uummata ayyaana kanaaf dhufu kiisiidhaa hamma kopheetti sakattauudhaan kaaniin ayyanicha akka hin hirmaatne duubatti deebisaa hamma nama 100 ammoo hidhuun beekameera. Haatau malee qeerroon magaala Bishooftuu irratti waraqaalee warraaqsaa hedduu fi ummati harki caalu kan harkatti qabate ta’uun beekama
Gama biraan magaalaa Bishooftuu bakka adda addaa keessatti qeerroon alaabaa ABO maxxansuu fi fannisuun ummata naannoo san irra darbu akka gammachiise beekamee jira.
Haala waraana wayyaanee ilaalchisee meeshaan dhukau osoo hin hafin uummata keessaa fi naannoo Irreechaa san kan buufatee jiru waraannii Wayyaanee kana kan jedhamu miti. Haatau malee uummata keessas faffacaanii yoo jiraatan illee Qeerroon dhaadannoo fi sirboota qabsoo Oromoo adda addaa dhageessisaa tureera. Uummataa fi Qeerroo keessaa kanneen ifatti WBO faarsan poolisootaan qabamanii mana hidhaatti akka geeffaman ifatti muldhatee jira. Walii gala gabaasaa dhimma kanaa gara fuula duraa qindeessinee isinii dhiheessina. Suuraan warraanni Wayyaanee ummata yeroo jeeqaa jiruu kanatti maxxansinee keenyee jirra.